Dagaal Beeleed ka qarxay Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose – idalenews.com
Wararka Shabakada Idale News Online ka helayso degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaaya in halkaasi saaka waaberigii uu dagaal aad u qaraar uu ka dhex dilaacey ciidamo ka wada tirsan dowlada federaalka Soomaaliya oo kala taageeraayo beelo isku haayo maamulka deegaanka.
Faahfaahinta dagaalka ka soo baxeysa ayaa la sheegayaa in dagaalku yahay mid beeleed u dhaxeeya ciidamada dowlada ee degmadaasi ku wada sugan oo iyagu in muddo ahba is diidanaa isla markaasna qaab beeleed u kala qeybsamey.
Goobjoog degmada ku sugan ayaa Idale News Online u sheegay in saaka ay ku waaberiisteen daryanka rasaasta waaweyn iyo qoryaha yar yar oo labada dhinaca ee dirirtu u dhaxeyso is weydaarsanayeen.
“Dagaalku waxaa uu u dhaxeeyaa ciidamada dowlada gaar ahaan kuwa guutada 2aad iyo guutada 6aad waxayna isu adeegsanayaan hub culculus” sidaasna waxaa yiri goobjooge degmada Afgooye ku sugan. sidoo kale waxuu sheegay in dagaalku uu bilowdey ka dib markii askar dhowr ah oo ka tirsan ciidamada dowladda ay isbaaro dhigteen gudaha magaalada iyo ciidan kale oo isku dayey inay qaadaan, waxaana halkaasi ka dhashey dagaal qaraar oo dhaawac iyo dhimasho dad rayid iyo ciidamadii dagaalamaayey sababey.
Maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada dowlada ee ku sugan degmada Afgooye ayaa iyagu ku howlan qaboojinta dagaalka, waxii faahfaahin ee dagaalkaas ku soo kordha kala soco wararkeena dambe.
Daawo: Gaado ka ciyaarka iyo dhoolatuska ay soo bandhigeen ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Maalintii Xuska Ciidanka Booliiska.